Kooxda uu ku sii jeedo Mauro Icardi oo la ogaaday – Gool FM
Kooxda uu ku sii jeedo Mauro Icardi oo la ogaaday
Dajiye August 30, 2019
(Milano) 30 Agoosto 2019. Xiddiga reer Argantina ee Mauro Icardi ayaa wali lala xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda Inter Milan kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
Kooxda reer Spain ee Atletico Madrid ayaa muujisay sida ay u xiiseeneyso in Inter Milan ay kaga soo qaadato qaab amaah ah xiddiga reer Argantina ee Mauro Icardi.
Wadahadaladii u dhaxeeyay kooxaha Inter Milan iyo Juventus ee ku saabsanaa inay isdhaafsadaan xiddigaha Paulo Dybala iyo Mauro Icardi la joojiyay, kaddib imaatinka Alexis Sanchez ee garoonka San Siro.
Icardi ayaa u arka in ka hoos shaqeynta macalinka ay isku dalka ka soo wada jeedaan ee maamula Atletico Madrid Diego Simeone ay tahay fursad qaali ah, gaar ahaan maadaama ay sidoo kale kooxda reer Spain ay ka qeyb galeyso Champions League xili ciyaareedkan.
Waxaa xusid mudan in Mauro Icardi uu ka maqnaa xafladii casho-sharafta aheyd ee xalay loo sameeyay ciyaartoyda kooxda Inter Milan, taasoo muujineysa in xiddiga reer Argantina uu ku dhow yahay ka dhaqaaqista garoonka San Siro, kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
Wax walba aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Isku Aadka UEFA Europa League oo maanta la sameyn doono
RASMI: Hazard oo ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa Europa League xilli ciyaareedkii tagay ee 2018/2019